ဘရာဇီးနိုင်ငံ - Howling Pixel
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Hora Legal Brasileira။ Observatório Nacional။ Archived from the original on 2011-07-22။ 2009-02-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၇.၀ ၄၇.၁ "Land and Resources". Encarta. MSN. Archived from the original on 2009-10-31. Retrieved 2008-06-11.
↑ ၄၉.၀ ၄၉.၁ ၄၉.၂ ၄၉.၃ "Natural Regions". Encarta. MSN. Archived from the original on 2009-10-31. Retrieved 2008-06-11.
↑ ၅၀.၀ ၅၀.၁ "Rivers and Lakes". Encarta. MSN. Archived from the original on 2009-10-31. Retrieved 2008-06-11.
ဂိုင်ယာနာ နိုင်ငံသည်တောင်အမေရိကတိုက်၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ကမ်းခြေတွင် တည်ရှိသည်။ အရှေ့မြောက်ဘက် နယ်နိမိတ်သည်
အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ ဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့် အရှေ့ဘက်၌ ဆူရာနမ်
နိုင်ငံတို့ ရှိသည်။ ယခင်က ဗြိတိသျှ ဂီယာနာဟု ခေါ်သည်။ ဂိုင်ယာနာ သမ္မတနိုင်ငံ၏ အကျယ်အဝန်းသည် စတုရန်း မိုင် ၈၃,ဝဝဝ ရှိ၍ လူဦးရေမှာ ၁၉၇၆ ခုနှစ် သန်းခေါင် စာရင်းအရ ၇၈ဝ,ဝဝဝ ခန့်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ ဂျော့တောင်းမြို့ ဖြစ်သည်။
လှပသော ရေတံခွန်များကြောင့် ဂိုင်ယာနာနိုင်ငံသည် ကျော်ကြားလေသည်။ ၁၄၉၉ ခုနှစ်ခန့်က စပိန်သင်္ဘောသားများ
ဤဒေသသို့ စတင် ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ၁၈ ရာစုနှစ်တွင် ယခုဂိုင်ယာနာ နိုင်ငံသည် ဒတ်ခ်ျကိုလိုနီနယ်ပယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆူရာနမ်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ဆူရာနမ် သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိက မြောက်ပိုင်းတွင် ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ပြင်သစ်ဂီယာနာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဂိုင်ယာနာနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ နှင့် မြောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ တို့ဖြင့် ဝန်းရံလျှက် ရှိသည်။ ဆူရာနမ်သည် ယခင်က ဗြိတိသျှ နှင့် ဒတ်ခ်ျတို့၏ ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ယခင်က ဒတ်ခ်ျဂီယာနာဟု အများက သိခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဆူရီနမ်သည် နယ်သာလန်မှ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်။
ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၆ သောင်း ၄ထောင် (၁၆၅,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) မျှ သာ ရှိသဖြင့် ဆူရာနမ်သည် တောင်အမေရိကတွင် အငယ်ဆုံးသော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေ အနေနှင့် ၄ သိန်း ၉ သောင်း ခန့်သာ ရှိပြီး အများစုမှာ မြို့တော် ပါရာမာရီဘိုမြို့ ရှိရာ နိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည်။
ဆောပိုလိုမြို့ (São Paulo) သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံ တွင် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး တောင်ကမ္ဘာခြမ်းနှင့် တောင်အမေရိကတွင် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတ္တမမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ ဆောပိုလိုမြို့သည် ဆောပိုလို မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ဆောပိုလို မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသမှာ အမေရိကတိုက်တွင် ဒုတိယမြောက် လူဦးရေအများဆုံးနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပဉ္စမမြောက် လူဦးရေအများဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဒေသ ဖြစ်သည်။ ဆောပိုလိုမြို့သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆောပိုလိုပြည်နယ်၏ မြို့တော်လည်း ဖြစ်ပြီး ဆောပိုလိုပြည်နယ်မှာ ဒေသအတွင်း စီးပွားရေး နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် အနုပညာနှင့် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် လွှမ်းမိုးမှုကြီးမားသော ဒေသဖြစ်သည်။ ဆောပိုလိုမြို့သည် နိုင်ငံတကာတွင် ထင်ရှားပြီး အယ်လ်ဖာဝေါလ်စီးတီး အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ မြို့၏အမည်မှာ ခရစ်ယာန် သူတော်စင် စိန့်ပေါလ် ကို အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တိုင်‌တေနီယမ်သတ္တုကို ၁၇၉၁ ခုနှစ်တွင်
အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဝီလျံဂရက်ဂါဆိုသူက စတင်‌တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂျာမန်လူမျိုး အမ်၊ အိပ်၊ ကလပ်ပရုပ်ဆိုသူက ရူတီး‌ခေါ် တိုင်‌တေးနီယမ်‌အောက်
ဆိုက် တွင်းထွက်ပစ္စည်းရိုင်းမှ ‌အောင်မြင်စွာ ထုတ်ယူရရှိ၍ ဂရိဒဏ္ဍာရီ၌ပါ‌သော ယူ‌ရေးနပ်၏သား တိုင်တန်ကို အစွဲပြုပြီးလျှင် တိုင်‌တေးနီယမ်ဟု အမည်‌ပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အ‌ပေါ်ယံ
‌မြေလွှာတွင် တိုင်‌တေးနီယမ်သည် ရာခိုင်နှုန်း ဝ. ၆၅ မျှပါဝင် သည်။ ကမ္ဘာ‌ပေါ်တွင် အ‌တွေ့ရအများဆုံး ဒြပ်စင်စာရင်းတွင် ယင်းသည် နဝမ‌မြောက် ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ အစ်လမင်နိုက်နှင့်
ရူတီး တွင်းထွက်ပစ္စည်းရိုင်းနှစ်မျိုးသည် တိုင်‌တေးနီယမ်သတ္တုမှ ထုတ်ယူ ရရှိ‌သော အဓိက ပစ္စည်းနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့‌သော် တိုင်‌တေးနီဖာရပ် မက်ဂနက်တိုက်၊ တိုင်တင်းနိုက်၊ ပီ‌ရော့စ
ကိုက်နှင့် အခြားတွင်းထွက်ပစ္စည်းရိုင်များတွင်လည်း ဤသတ္တု ပါဝင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ရုရှနိုင်ငံနှင့် ‌နော်ဝေနိုင်ငံများတွင် တိုင်‌တေနီယမ် တွင်းထွက်ပစ္စည်းရိုင်းကို အနှံ့အပြား ‌တွေ့ရ သည်။
ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲသည် နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (ဖီဖာ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးပွဲ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း ၁၉၄၂ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တို့တွင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြောင့် ရပ်နားခဲ့ရသည်။
ပထမ ၃ နှစ်ကာလတွင် တိုက်ကြီးများအလိုက် ခြေစစ်ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။ နောက်ဆုံး ခြေစစ်ပွဲကို အောင်နိုင်သည့် အသင်းများနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအသင်း စုစုပေါင်း ၃၂ သင်း ၁ လသာကြာသည့် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွင် ပါဝင် ဗိုလ်လုကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၈ ကြိမ်တွင် နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံမှ ဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံများအနက် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ ၅ ကြိမ်တိုင်တိုင် ချမ်ပီယံဆု ရခဲ့ပြီး အကြိမ်တိုင်းတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့သည့် နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ချမ်ပီယံ အီတလီနိုင်ငံမှာ လေးကြိမ်ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ သုံးကြိမ်သရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဥရုဂွေးနှင့် အာဂျင်တီးနားတို့မှာ ၂ ကြိမ်စီ၊ အင်္ဂလန်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့မှာ ၁ ကြိမ်စီ အသီးသီးရခဲ့ဖူးသည်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲသည်လည်း ကမ္ဘာတဝှမ်း လူကြည့်အများဆုံး အားကစားပွဲ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဂျာမနီတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲကို ပရိသတ်ပေါင်း ၇၁၅ သန်းခန့် ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့အထိ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ၎င်းပွဲစဉ်တွင် စပိန်နိုင်ငံမှ ဗိုလ်စွဲအနိုင်ရရှိခဲ့လေသည်။။ ၂၀၁၄ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားကိုမူ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံက အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံက အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။
ဘရာစေးလေးယားမြို့သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်မြို့တော် ဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ ဒေသအတွင်း အစိုးရ ရုံးထိုင်ရာ မြို့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အလယ်အနောက်ပိုင်းရှိ ပလာနယ်တို စင်ထရယ် ဟု ခေါ်သော ကုန်းပြင်မြင့် တလျှောက်တွင် တည်ရှိသည်။ မြို့နေ လူဦးရေ ၂,၅၆၂,၉၆၃ ဦးရှိပြီး မက်ထရို ဒေသအတွင်း လူဦးရေ ၃,၇၁၆,၉၉၆ ဦး ရှိသည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသမှာမူ ဆဌမမြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေခံနေရာ တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဘရာစေးလေးယားမြို့သည် ၂၀ ရာစုမတိုင်ခင်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် တည်ရှိမနေခဲ့သော မြို့များတွင် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။
ဘရာဇီး အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း
ဘရာဇီး အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း(ပေါ်တူဂီ: Seleção Brasileira de Futebol)သည် နိုင်ငံတကာကစားပွဲများ၌ ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းဖြစ်သည်။ ဘရားဇီးနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(Brazilian Football Confederation) (CBF) မှ အုပ်ချုပ်သော အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး ဖီဖာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ၁၉၂၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့ပြီး CONMEBOL အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ၁၉၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘော်နီယိုကျွန်း (မလေးအခေါ် ဘော်နီယို၊ အင်ဒိုနီးရှား အခေါ် ကာလီမန်တန်) ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယမြောက် အကြီးဆုံးကျွန်း ဖြစ်ပြီး ဩစတေးလျနိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိကာ အရှေ့တောင် အာရှ ရေကြောင်းပိုင်နက်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသည်။
ဘော်နီယိုကျွန်းကို ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့မှ ခွဲဝေ၍ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကျွန်း၏ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်တွင် ရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင် ရှိသော မလေးရှား နိုင်ငံ ဆာဘားပြည်နယ်နှင့် ဆာရာဝပ် ပြည်နယ်တို့သည် ကျွန်း၏ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းမျှသော နေရာကိုယူထားသည်။ မြောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွင်ရှိသော ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘော်နီယိုကျွန်း၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှသော မြေနေရာပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံးသော သစ်တောရှိပြီး ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရှိ အမေဇုန်တောအုပ် ထက်ပင် ရှေးကျသည်ဟု ဆိုကြသည်။
အုန်းနို့ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေါ်ဆိုသည့် အုန်းသီး၏အတွင်းနံရံမှ ညှစ်ယူရရှိသည့်အရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံတွင် စန်တန်ဟုလည်းကောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ပေါ ကီရီ ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ၎င်းနို့ရည်သည် အရောင်၊ အရာသာရှိသည့်အပြင် အဆီပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်မားသည့်အတွက် ဆီအဖြစ်ထုတ်ယူနိုင်သေးသည်။ ကမ္ဘာ့ဒေသအတော်များများတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် coconut milk ဟူသည့်အသုံးနှုံးကို သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နေသော အုန်းသီးအတွင်းရှိ အုန်းရည်အဖြစ် ရည်ညွှန်းသုံးစွဲသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
အထူ(အရင့်) နှင့် အပါး(အနု)ဟူ၍ အုန်းသီးအမျိုးအစားကို နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ အုန်းသီးအရင့်ကို အုန်းနို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ အုန်းခြစ်ဖြင့် ခြစ်ယူရသည်။ ထို့နောက် အဝတ်ပါးပါးတွင် ထည့်သွင်းထုပ်ရသည်။ ထို့နောက် ရေနွေးနွေးကို စုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက် အဝတ်ပါးပေါ်တွင် လောင်းချပြီးနောက် လက်ဖြစ်သော်လည်းကောင်း စက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ညှစ်ယူခြင်းဖြင့် အုန်းနို့ကို ရရှိသည်။ အုန်းသီးအရင့်၏ နို့ရည်ကို ကျိုချက်၍ဆီအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ အနှစ်ကို ဆော့အဖြစ်လည်းကောင်း အခြားမှုန့်အချိုပွဲများနှင့် တွဲဖက်စားသုံးနိုင်သည်။ အုန်းသီးအနု၏ နို့ရည်ကိုမူ စွပ်ပြုတ်များနှင့် အခြားဟင်းများ ချက်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အနောက်နိုင်ငံများတွင် အုန်းနို့ကို သံဗူးအတွင်း စည်သွတ်ရ ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြသည်။ ၎င်းအုန်းနို့သံဗူးများကို အုန်းသီးအနု၊ အရင့်များအားလုံးပေါင်းပြီးလျှင် ရည်ဖြင့်ရောသေးသည်။ ထို့နောက် အထူးစီစဉ်ကာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြသည်။
အုန်းနို့သည် အာယုဗ္ဗေဒ တိုင်းရင်းဆေးဝါးပညာနှင့်အတူ တွဲ၍တည်ရှိနေသည်မှာကြာလေပြီ။ ရမ်းနေကျွန်း၊ ဆော်လမွန်ကျွန်းနှင့် အခြားအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် အုန်းနို့ကို တဆေး၊ သကြားတို့နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ အပင်ပု၊ ချုံပုတ်များတွင်း တစ်ပတ်ခန့်သိမ်းဆည်းထားစေခြင်းဖြင့် အချဉ်ပေါက်စေရန်သည်။ ၎င်းအုန်းနို့ရမ်အရက်အကြောင်းကို သည်ဆွီ့တီးဝိုင်း(The Sweet Band)မှ ပုပ္ပါး ဂျိုး သီဆိုသည့် သီချင်းတွင် တွေ့ရသည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် အုန်းရည်နှင့် အကြားပေါင်းစပ်ကာ Batida de Côco ဟုခေါ်သည့် ခွတ်တေးတစ်မျိုးကို ပြုလုပ်ရောင်းချကြသည်။
တွင် အငယ်ဆုံးသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင်
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၊ တောင်
ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်တို့တွင် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ တည်ရှိ
သည်။ ဥရုဂွေးမြစ်သည် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံနှင့် ဥရုဂွေးနိုင်ငံတို့
စပ်ကြား နယ်နိမိတ်အဖြစ်စီးဆင်းသည်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ
စီးဆင်းလာသော ပါရနာမြစ်သည် မြစ်ဝတွင် ဥရုဂွေးမြစ်နှင့်
ပေါင်း၍ လာပလာတာမြစ်အဖြစ် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့
စီးဝင်သည်။ မြောက်ဘက်၌ ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့် စပ်လျက်ရှိသော
နယ်နိမိတ်သည် မိုင် ၄၅ဝ ရှည်လျားသည်။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံသည်
၇၂,၁၇၂ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်း၍ ၁၉၇၂ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေ
အရ လူဦးရေ ၂,၉၆ဝ,ဝဝဝ ယောက် ရှိသည်။
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ မြေမျက်နှာပြင်သည် များသောအားဖြင့်
ပျံ့ပျူးသည်။ မြောက်ပိုင်းတွင် တောင်တန်းများ ရှိသော်လည်း
ပေ ၂,ဝဝဝ ထက်မြင့်သောတောင် မရှိချေ။ ထိုတောင်တန်းများ
၏ အနောက်ဘက်တွင် မြေပြင်သည် ဥရုဂွေးမြစ်ကြောင်းသို့
တဖြည်းဖြည်းပြေ၍ နိမ့်ဆင်းသွားသည်။ ထိုလွင်ပြင်ပိုင်းသည်
ရှုခင်းသာယာ၏။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင် သဲကန္တာရများ၊ တောနက်
ပင်လယ်ဘက်မှ လေပြေလေညင်းတိုက်ခတ်သဖြင့် နွေရာသီ၌
အေး၍ ဆောင်းရာသီ၌နွေးသည်။ အပူဆုံးလဖြစ်သော ဇန်နဝါရီ
တွင် ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ဖာရင်ဟိုက် ၇၄ ံဖြစ်၍၊ အအေးဆုံးလ
ဖြစ်သော ဇွန်လတွင် ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ဖာရင်ဟိုက်၅ဝ ံဖြစ်
သည်။ တစ်နှစ်အတွက် ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်မှာ ၄၃ လက်မဖြစ်
သည်။ ဧပြီလနှင့် မေလတွင် မိုးအများဆုံး ရွာသွန်းသည်။
သို့ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးခေါင်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်
ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင် ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးခြင်းထက် တိရစ္ဆာန်
မြောက်ပိုင်း တောင်ကုန်းဒေသတွင် ရွှေကိုတူးဖော်ရရှိ
သည်။ ငွေ၊ ကြေးနီ၊ သံနှင့် မန်ဂနိစသော တွင်းထွက်ပစ္စည်း
များကိုလည်း အနည်းငယ်ရရှိသည်။ ကျောက်မီးသွေးမထွက်
သောကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် လျှပ်စစ်အင်အားကို အသုံး
ပြုရသည်။ ထို့ကြောင့် ဥရုဂွေးမြစ်၏ မြစ်လက်တက်ဖြစ်သော
ရီအိုနီဂရိုးမြစ်တွင် ရေကာတာဆောက်လုပ်၍ လျှပ်စစ်အင်အား
ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင် သိုး၊ နွားမွေးမြူခြင်းသည် အဓိက
လုပ်ငန်းဖြစ်၍ နိုင်ငံမှထွက်ကုန် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထို
လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
မြေယာငါးပုံလေးပုံကို တိရစ္ဆာန်စားကျက်အဖြစ် အသုံးချကြ
သည်။ အယ်ဖာဖာ (လူဆန်ပဲပင်) ကို တိရစ္ဆာန်အစာအတွက်
စိုက်ပျိုးသည်။ အခြားစိုက်ပျိုးသောသီးနှံပင်များမှာ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊
မြင်းစားဂျုံ၊ မုယောနှင့်ဘီသွာလျှော်တို့ဖြစ်သည်။ တောင်စောင်း
များတွင် စပျစ်ခြံများ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံမှ
ထင်ရှားသော ထုတ်ကုန်များမှာ သိုးမွေး၊ အမဲသား၊ ဆီသွတ်
အသား၊ သားရေနှင့် ဘီသွာစေ့တို့ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင် မီးရထားလမ်း မိုင်ပေါင်း
၁,၈၇ဝ ခန့် ဖောက်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းသွားလာရေး
အတွက် မော်တော်ကားလမ်း၊ ရေကြောင်းခရီးလမ်းတို့ကိုလည်း
အသုံးပြုသည်။ တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ မြို့ကြီးများနှင့်သင်္ဘော
လမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ လေကြောင်းလမ်းတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်
ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူတို့သည် များသောအားဖြင့်
စပိန်လူမျိုးနှင့် အီတာလျံလူမျိုးတို့၏ အဆက်အနွယ်များဖြစ်ကြ
သည်။ စပိန်ဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြ၍ စပိန်လူမျိုးတို့၏
ဓလေ့ထုံးစံများကို လိုက်နာကျင့်သုံးလေ့ ရှိလေသည်။ လူတိုင်း
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်၏။ ဗရင်ဂျီဝါဒသည်ကား လူများစု
ကိုးကွယ်သည့် အယူဝါဒဖြစ်သည်။ အစိုးရက အခမဲ့ပညာရေး
စနစ်ကိုပြဋ္ဌာန်း၍ မူလတန်းပညာကို မသင်မနေရအဖြစ် သတ်
မှတ်ထားသည်။ အထက်တန်းပညာ သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်
မွန်တီဗစ်ဒီအိုမြို့တော်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကို ၁၈၄၉ ခုနှစ်
၁၅၁၆ ခုနှစ်တွင် စပိန်သင်္ဘောသားတစ်စုတို့က
ဥရုဂွေးကမ်းခြေပေါ်သို့ ဦးစွာရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း အခြေစိုက်မိ
သူတို့မှာ ပေါ်တူဂီလူမျိုးများဖြစ်သည်။ ၁၆၈ဝ ပြည့်နှစ်တွင်
ပေါ်တူဂီတို့သည် ဥရုဂွေးကမ်းပေါ်၌ ခံတပ်တစ်ခုကို တည်
ဆောက်ကြသည်။ သို့ရာတွင် အာဂျင်တီးနားမှ စပိန်တပ်များက
ပေါ်တူဂီတို့ကို တိုက်ထုတ်၍ ထိုနယ်တွင်အခြေစိုက်ကြသည်။
တဖန် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ပေါ်တူဂီတို့က ဥရုဂွေးကို စပိန်တို့၏
လက်မှ သိမ်းယူကြပြန်သည်။ ဥရုဂွေး တိုင်းရင်းသားတို့သည်
စပိန်တို့၏ ကြီးစိုးမှုကိုလည်းကောင်း၊ ပေါ်တူဂီတို့၏ကြီးစိုးမှုကို
လည်းကောင်း တွန်းလှန်ပြီးလျှင် ၁၈၃ဝ ပြည့်နှစ်တွင် လွတ်
လပ်သော သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ကြသည်။ သို့ရာတွင်
ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း အာဏာလုမှုကြောင့်
ထို့ကြောင့် ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ၏အာဏာကို
ကန့်သတ်ပေးသော အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့
သည်။ တစ်ဖန် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ထိုအခြေခံဥပဒေကို ပြင်၍
အပ်နှင်းကြသည်။ ထိုကောင်စီတွင် ပါလီမန်ရှိ လူများစုအဖွဲ့
က ခြောက်ဦးနှင့် လူနည်းစုအဖွဲ့က သုံးဦးပါဝင်၍သက်တမ်းမှာ
သုံးနှစ်ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေ
ရွေးကောက်ပွဲကြီးနှင့်အတူ ပူးတွဲကျင်းပခဲ့သော ပြည့်သူ့ဆန္ဒခံယူ
ပွဲကြီးအရ ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင် သမ္မတအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ပြန်လည်
ကျင့်သုံးခဲ့လေသည်။ သမ္မတသည် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါဝင်သော
ပါလီမန်တွင် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်နှင့် ပြည့်သူ့လွှတ်
တော်ဟူ၍ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ရှိရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
များကို ပြည်သူတို့က ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက်တင်မြေ|ာက်
ရသည်။ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ ၃၁ ဦး
ရှိ၍ ပြည့်သူ့လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ ၉၉ ဦး
မွန်တီဗစ်ဒီအိုမြို့သည် ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်၍
အကြီးဆုံး ဆိပ်ကမ်းမြို့လည်းဖြစ်သည်။ အခြား ထင်ရှားသော
မြို့များမှာ မာဆေးဒိမြို့၊ ပိုင်ဆန်ဒူးမြို့နှင့် ဆားလတိုမြို့များဖြစ်